FDG Ambo Keessatti Qabate Daran Jabaachuu Irraan Waraanni Wayyaanee Gaaza Nama Boosisuun gadi dhiisuu fi reebicha akkasumas rasaasaan Oromoota reebaa jiraatu illee gaaffii mirgaa gaafachuun duuubatti hin deebine.
Waraanni Agaaxii jedhamu Barataa Oromoo Abirihaam Suufaa adda isaa irra rasaasaan rukutuun FDG daran hammeesse!
Ebla 29/2014 Goototni Barattootni Oromoo, Yuunibarsiitii Amboo Damee Awwaaroo,fi Barattootni m/b Amboo sadarkaa 2ffaa, Qopha’inaa fi sadarkaa 1ffatiin FDG dhoofamee guutummaatti Uummata Magaalaa Amboo hunda hirmaachisee hiriirrii Guddaan Magaalaa Amboo keessatti gaggeeffamaa jira.
Hiriira kana bittineessuuf Mootummaan abbaa irree waraanaa Agaazii jedhamuu Magaalaa Amboo fi Mooraa manneen barnootaatti gadhiisuun dhukaasaa uummata nagaa karaa nagaa fi Dimookiraasii mirga isaa falmachaa jiru qawweedhaan goolaa jiru.
Hiriirrii guddaan Magaalaa Amboo keessatti gaggeeffamaa jiru kun
Manneen Barnootaa sadarkaa 2fffaa, kanneen akka;
1. Mana Barumsaa sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’ina Amboo,
2. Mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Liiban Maccaa Amboo,
3. Mana Barumsaa sadarkaa 2ffaa Amboo naannoo pan Afrikaatti argamu,
4. Mana Barumsaa sadfarkaa 1ffaa Carii Amboo
5. Yuunibarsiitii Amboo Damee Amboo irraa walitti dhufuun Jiraattoota
Guutummaa Uummata Oromoo Magaalaa Amboo dabalatee hiriirrii guddaa
kan namoota 25,000 ol hirmaachisee magaalaa Amboo keessatti gaggeeffamuun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bakka olaanaa qabatee jira.
Mootummaan Abbaa irree fi shororkeessaan Wayyaanee gaafffii uummataa fi dargaggoota barattoota Oromoo bakkaayyuu itti ka’aa jiru dura dhaabbachuu dadhabuu fi deebii kennuu dhabee dhiphatee utuu uummaanni nagaadhan mirga isaa qe’ee isaa irratti falmachaa jiruu uummata nagaa irratti waraanaa Agaazii bobbaasuun dhukaasaa gaazii immimmaan ija keessa nama naquu fi rasasaa uummata irraatti dhukaasuun barattoota m/b Amboo sadarkaa 2ffaa fi Qopha’ina lama rasaasan rukkuchuun gabaafamera.
Haala kanaan barattoota Oromoo rukutaman keessa kan amma hospitala Amboo galee yaalaamaa jiru:
Barataa Oromoo Abirihaam Suufaa kan jedhamu barattaa Mana Barumsaa Ambootti Barataa kutaa 12ffaafi qopha’inatti barataa Natural science kan baratuadda isaa irra madeeffamuun yeroo amma Hospitaalaa Amboo galee jira.
Barattootni Oromoo fi Dargaggootni Oromoo hedduun yeroo amman kanatti gaazii nama boosisuu fi sochii nama dhorkuu irratti dhukaasuun konkolaataadhan ukkanfamanii qabamanii mana hidhatti guuramaa jiru.
Haalli kun hamma ammaatti sochii FDG hiriira gaggeeffamaa jiru dhaabuu hin dandeenye hiriirrii fi dhaadannoo mirgii keenyaa kabajamuu qaba, sagaaleen keenya dhaga’amuu qaba, hidhamtootni oromoo hiikamuu qabu, jedhuu fi Mirgii abbaa biyyuummaa Finfinnee irraa qabnu nuuf kabajamuuqaba jedhu ittuma fufee jira gabaasaan kun itti fuufa.
Gabaasii guutuun itti aanee ni qindaawa.
Gadaan Gadaa Bilisummaati1